Tsy misy fahazavana hafa
“Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana , ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny” Mat. 24:24
Amin’izao andron’ny fahadisoan-kevitra izao dia tsy maintsy miaro ny finoana nomena ny olona masina izay rehetra miorina amin’ny fahamarinana. Hiseho amin’ny asa maizina ataon’i Satana ireo karazana fampianaran-diso, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza hofitahina sy hiala amin’ny fahamarinana. Ilaina toherina ny fahendren’olombelona, ny fahendren’ireo avaram-pianarana izay, tahaka ireo Fariseo, mampianatra ny lalan’Andriamanitra kanefa tsy mankato ny lalàna akory. Ilaina ny miady amin’ny tsy fahalalan’olombelona sy fahadalana noho ny fahalalana mivaona, miafina ao anatin’ny fitafiana vaovao sy marevaka, fahalalana izay sarotra kokoa ny miady aminy satria tsy mitombina akory.
Hisy nofy sy fahitana mamitaka izay misy sombim-pahamarinana, saingy mitarika amin’ny fanalavirana ny finoana madio. Nomen’Andriamanitra ny olona ny fitsipika hamantarana izany: “ Ho amin’ny lalàna sy ny teni-vavolombelona ihany! Raha tsy miteny araka izany teny izany izy, dia olona izay tsy hiposahan’ny fahazavan’ny maraina” Isa. 8:20. Raha manamaivana ny lalan’andriamanitra izany, raha tsy miraharaha ny sitrapon’Andriamanitra ambaran’ny tenivavolombelon’ny Fanahiny izany, dia mpamitaka izy ireo. Entanin’ny fihetseham-po sy fahatsapana izy ireo, izay inoany fa avy amin’ny Fanahy Masina ary heveriny fa azo ianteherana kokoa noho ny Teny nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra izany. Milaza izy ireo fa avy amin’ny Fanahy ny saina sy ny fahatsapana rehetra; ary rehefa hamarinina amin’ny alalan’ny Soratra Masina izy ireo dia milaza fa manana zavatra azo itokiana kokoa. Koa raha mihevitra izy ireo fa tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra dia hay, raha ny marina, manaraka ny fisainana volen’i Satana.
Hiasa amin’ny fomba mamitaka i Satana mba hampidirana ireo zavatra noforonin’ny sain’olombelona mitafy fitafian’anjely. Kanefa, hamirapiratra eo anivon’ny fahamaizinana ara-panahy ny fahazavana avy amin’ny Tenin’Andriamanitra; tsy ho voasolon’ny fisehosehoana ombam-pahagagana velively ny Baiboly. Tsy maintsy hianarana ny fahamarinana, tsy maintsy katsahina toy ny harena miafina izany. Tsy omena ivelan’ny Tenin’Andriamanitra na koa maka ny toeran’izany Teny izany ny fahazavana mahatalanjona. Aoka hifikitra amin’ny Teny, raiso ny Teny atao girefy, izay mahatonga ny olona ho hendry ho amin’ny famonjena. SIM, b.2, t. 100.